I-DG4Pros-Isakhelo esigqibeleleyo sekhamera yedrone oblique yekhamera kunye nabenzi | Imvula
Uzalelwe imodeli ye3D yesass-yokwakha isass
I-RIY-DG4 PROS okwangoku yeyona khamera ye-oblique ehamba phambili kwezobuchwephesha kwimarike. Yakhelwe ngaphakathi i-Double Gauβ kunye ne-Aspherical lens eyongezelelweyo, enokuthi ibuyise ukuphambuka, inyuse ubukhali, ukunciphisa ukusasazeka kunye nokulawula ngokungqongqo izinga lokugqwetha elingaphantsi 0.4%.
Inokubekwa kumaphiko amiselweyo kunye needrones ezininzi ezijikelezayo, kwaye ngenxa yokuba ubude obugxile kukude ngokwaneleyo, kuya kuba kukhuselekile ukubhabha nakwiindawo ezinde zokwakha. uphando, ke imifanekiso ethathwe yi-DG4Pros q ilunge kakhulu, kwaye imodeli ye-3D esekwe kule mifanekiso ikwayinyani njengehlabathi lokwenyani.
Ubuncinane bexesha lokuvezwa kwe-.60.6s, oko kuthetha ukuba nokuba ibekwe kwi-drone enamaphiko amiselweyo, inokugqibezela ukufumana idatha ngelixa idrone ibhabha ngesantya esiphezulu.